Mampalahelo fa tsy voaro amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana isika rehetra. Na inona na inona lazain'ny olona iray, fa raha manana fiainana ara-pananahana mihetsiketsika sy miovaova ianao, na ho ela na ho haingana dia mety hiharan'ny fisehoan'ny aretina toy ny sipilis, gonorrhea, trichomoniasis, herpes ara-pananahana sns. Saingy azontsika atao ny mampihena ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fihetsika tsotra nefa mahazatra.
Voalohany, aza hadino ny mampiasa fimailo rehefa manao firaisana amin'ny vady vaovao. Fantatrao ve fa izao dia misy safidin-javatra goavambe fotsiny, na lahy na vavy? Ankoatr'izay, ny fahombiazan'ny kapaoty vehivavy dia tsy ambany noho ny an'ny lehilahy.
Mampidi-doza indrindra amin'ny drafitra aretina azo avy amin'ny firaisana ny karazana firaisana dia anal sy fivaviana. Mampidi-doza ihany koa ny firaisana am-bava tsy misy kapaoty, fa raha misy firaisana amin'ny fivaviana na anal dia dimam-polo isan-jato ny aretina azo avy amin'ny firaisana, dia telopolo isan-jato amin'ny firaisana am-bava.
Ny kapaoty dia hiaro anao amin'ny sivy amby sivi-folo sy sivy ampolon'ny isan-jato, avo dia avo ny tarehimarika, sa tsy izany? Mampalahelo fa mba ho voaro amin'ny zato isan-jato ianao amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana, dia tokony hiala amin'ny firaisana tanteraka ianao, na "hirotsaka" ao aminy irery eo am-pijerena sary vetaveta.
Misy fomba maro hafa hiarovana ny tenanao amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana, fa ny fahombiazany dia ambany noho ny kapaoty. Ireo dia manasa ny taovam-pananahana sy ny douching amin'ny fanafody antiseptika toy ny chlorhexidine sy miramistin. Saingy, ohatra, ny douching dia misy vokany hafa aza - raha misy ny aretina aorian'izany, amin'ny douching ianao dia hitondranao azy hatrany amin'ny taovam-pananahana. Ka miaraka amin'ny kapaoty ihany ny antiseptika, fa tsy tokony hatao!
Raha izany no izy, mariho tsara fa ny fanabeazana aizana (sombin-dronono, menaka, supository, pilina) dia tsy hanampy anao raha sendra gonorea ianao, na koa voan'ny VIH aza.
Aza adino, fara fahakeliny, indray mandeha isaky ny enim-bolana, miaraka amin'ny fiainana firaisana ara-nofo mavitrika sy ny fanovana matetika ny mpiara-miasa - matetika kokoa, mba hozahan'ny mpitsabo aretin-tsaina ary handray ny fitsapana ilaina rehetra, satria ny fisorohana ny aretina azo avy amin'ny firaisana dia saika mandaitra fimailo, ary ny fitaintainana aretina maro toy izany dia misy amin'ny zava-misy fa amin'ny dingana voalohany dia tsy sarotra ny manasitrana azy, fa isan'andro kosa dia mihasarotra hatrany izany.
Kiboho: antony sy fitsaboana
Ny bakteria sy ny viriosy no fototry ny microworld
Aretina syphilis: ny vokany, ny diagnostika ary ny fitsaboana
Inona no atao hoe thrush? Mifindra amin'ny lehilahy amin'ny vehivavy ve ny thrush?
Sintona mampiavaka ny SIDA amin'ny lehilahy
Prev Fomba nentim-paharazana amin'ny fitomboan'ny hery
Manaraka Afaka misotro labiera ve aho amin'ny sauna?
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,762.